109 taona ny rugby malagasy : sambany nitondra medaly nody ny Makis à 7 | NewsMada
109 taona ny rugby malagasy : sambany nitondra medaly nody ny Makis à 7
Tsy nitsanga-menatra ny Rugby malagasy, na mbola miaina zava-tsarotra aza ankehitriny. Efa anisan’ireo firenena manana ny toerany eto Afrika mantsy ny Makis de Madagascar. Betsaka ny efa vita fa maro koa ny mbola miandry.
Sambany ary voalohany, tato anatin’ny 109 taona, nisian’ny Rugby malagasy, vao nitondra medaly nody ny rugby à 7. Ny Makis de Madagascar irery no hany firenena miteny frantsay nandresy an’i Zimbaboe, izay efa indimy niatrika “Mondial” ary tafita tamin’ny manasa-dalana, nandritra iny “Can 2017” iny.
Anisan’ny niaiky ny fahaizan’ireo mpilalaon’ny Makis ary nampirisika ny hifotorana mafy amin’ity rugby à 7 ity i Abdelaziz Bougja, filohan’ny kaonfederasiona afrikanina. Vokatr’izay, nilaza ny solontenan’ny minisiteran’ny Fanatanjahantena sy ny fanajariana ny tany fa hatao raharaham-pirenena amin’izay ny fanajahantena. Hisy tetikasa ho an’ireo federasiona 15 mendrika, izay hovatsin’ny fanjakana vola manokana ary homena fiofanana hampivoarana ny taranja.
Ankoatra izay, tsy nijery fotsiny ny zava-bitan’ny Makis de Madagascar, sokajy “sénior” sy ny “U18” rugby à 7, ny Malagasy rugby fa nankasitraka ireo mpilalao, rehetra. Notanterahina ny asabotsy lasa teo, tetsy Ankorondrano, izany lanonana izany. Raha tsiahivina, samy nahazo ny laharana fahatelo avokoa ireo ekipa roa ireo. Ny “sénior”, teo amin’ny “Can 2017”, natao tatsy Ogandà ary ny U18, nandritra ny fiadiana ny “Afrasia 2017”, tany Maorisy. Nomen’ny Malagasy rugby fitaovana sy lelavola ry zalahy. Teo koa ilay 10 tapitrisa Ar efa nampanantenain’ny minisitry ny Fanatanjahantena, Andriamosarisoa Jean Anicet ka vao ny 5 tapitrisa Ar ihany no nomena azy ireo fa ny ambiny, hatolotra amin’ny fotoana manaraka.